Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 06/11/2020)
Izincwajana zemininingwane travel kuyinto okukhulu eYurophu, futhi sinemihlahlandlela umuzwa ngeke ekushintsheni yisiphi isikhathi maduze. Kukhona izizathu ezimbalwa kungani izitimela zimi ethandwa phakathi baseYurophu, futhi bonke babo bayithusi 100% Legit: zingabantu super okusheshayo, kuqiza kahle, futhi elula ngazo zonke izindlela. plus, Trains in Europe rides are lakwa- nesipiliyoni travel, okungenye nje ibhonasi yonke into!
Linda, ini? Yebo, iqiniso! Ngenxa into ebizwa "Izitimela ubusuku Europe"Izihambi ngubani uchithe imali engaphezu kwama 10 amahora esitimeleni ukusuka endaweni A kuya endaweni B kungaba uthokozele imivuzo Yohlelo ogibele i Izitimela ngobusuku obubodwa eYurophu nase ukonga imali ku ehhotela. Kunezinhlobo eziningana izinhlobo ezahlukene zokulala ahlinzekwa ngaphakathi "izitimela ngobusuku obubodwa," elakhelwe ukulingana izintandokazi wokujikeleza wonke umuntu futhi isabelomali sabo. Ngakho, sinezinto:
Hhu, you’re not dreaming – for the most part, ujantshi maqembu ihambisane amabhonasi okungaba lutho kusukela izipho ezincane ezifana isikebhe ugibele futhi ibhasi lithutha liye ezaphulelo emahhotela nase izinkambo zokuhamba. Ngezinye izikhathi, ungathola ngisho imivuzo ikunikela imisebenzi ngokuphelele kuhlanganise khulula emfuleni cruises, ukudla, futhi ngendlela efanayo.
Ngokuzayo uma uhlangabezana lacabanga noma cha ngihambe ngesitimela - sicabanga impendulo pretty kucacile ... akunjalo? Iya ku Londoloza-A-zemininingwane ukubhuka endaweni oya kuyo 3 amaminithi, at the rates eshibhe futhi ethathelwa izimali yokubhuka obnoxious!